May 3, 2022 - Achawlaymyar
May 3, 2022 by Achawlaymyar
စပါးစေ့လို သေး ချွန် ပြီး ပိတ်နေ ရင် အိုဇာ တာ ကောင်းပါတယ်… မိမိ ရှာသည်ဖြစ်စေ သူတစ်ပါး ကူညီသည် ဖြစ်စေ ပြည့်စုံပြီး မပူပင်ရပါ… စပါးစေ့ပုံ မဖြစ်ပဲ ဟ နေရင် မျဉ်းပြိုင် ဖြစ်နေရင် ဆင်းရဲ ချမ်းသာမဟူ မိမိက ရှာ သူများက သုံး ကိုယ့်မရှိရင် သူများက လာမပေးတဲ့ ကံမျိုးပါ…. အိုဇာတာ ကောင်းလိုလျှင် မာနများကို ခဝါချပြီး နူးညံ့မှုများနဲ့ အစားထိုးပါ။ ဆုပ်သော လက်များ လွှတ်ချပြီး ဖြန့်သော လက်ဖြင့် ကြိုဆိုပါ။ အပိုကိစ္စ လျော့ချပြီး ဘာသာရေးကို အလေးပေး ဆောင်ရွက်ပါ။ တကိုယ်ကောင်း ဆန်မှုကို ကျောခိုင်းပြီး မျှတစိတ်ဖြင့် တည့်မတ်ပါ။ စွတ်ဖက်မှုများ … Read more
၂၀၂၂ ေမလ ၅ ရက္ ၉ရက္အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မုန္တိုင္းရဲ႕ အထက္ေလစီးေၾကာင္းေတြကေန မိုး႐ြာႏိုင္ၿပီး မိုးႀကီးႏိုင္တယ့္ေဒသမ်ား
၂၀၂၂ ေမလ ၅ ရက္ ၉ရက္အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မုန္တိုင္းရဲ့ အထက္ေလစီးေၾကာင္းေတြကေန မိုးရြာနိုင္ၿပီး မိုးႀကီးနိုင္တယ့္ေဒသမ်ား ၂၀၂၂ ေမလ ၉ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မုန္တိုင္းရဲ့ အထက္ေလစီးေၾကာင္းေတြကေန မေကြးတိုင္းမိုးရြာနိုင္ၿပီး မေကြးတိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဖက္ပိုင္း မိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္ ရခိုင္ရိုးမေပၚမိုးမ်ားစြာရြာသြန္းနိုင္သျဖင့္ ရခိုင္ရိုးမေခ်ာင္းဖ်ားခံတဲ့ ေခ်ာင္းမ်ား ေခ်ာင္းေရမ်ားစြာ စီးဆင္းလာနိုင္ကာ ေခ်ာင္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးထားေသာေကာက္ပဲ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆုံးမႈမရွိေအာင္ ေမလ ၉ရက္ေန႔မတိုင္မွိ ရိတ္သိမ္းၾကၿပီး လုံျခဳံတဲ့ အမိုးအကာေအာက္ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားၾကပါရန္ အႀကံျပဳလိုက္ပါတယ္ ခန္႔မွန္းခ်ိန္ 03/05/2022 ၂၀၂၂ ေမလ ၃ရက္ေန႔မွ ၅ရက္ေန႔အတြင္း အညာေျမဆီကိုမိုးေတြလာၿပီေလ ⛈⛈⛈⛈⛈ ၂၀၂၂ ေမလ ၈ရက္ေန႔ ၉ရက္ေန႔ ပုသိမ္ခရိုင္ လပြတၱာခရိုင္ဗ်ာပုံခရိုင္ မိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္ ျမင္းၿခံခရိုင္ မိတၳီလာခရိုင္ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ မႏၲေလးခရိုင္ … Read more
လျှာရှည်ချင်တဲ့ တက္ကစီမောင်းသမား နှင့် ဉာဏ်ကောင်းလွန်းတဲ့ မိခင်
လျှာရှည်ချင်တဲ့ တက္ကစီမောင်းသမား နှင့် ဉာဏ်ကောင်းလွန်းတဲ့ မိခင် ညတစ်ညမှာပေါ့။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ၈ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အတူ တက္ကစီငှါးစီးလာတယ်။ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် တစ်နေရာမှာ ညည့်ငှက်မလေးတွေကို ကလေးက မြင်တော့ မေးတယ်..။ “မေမေ.. အဲဒီမမတွေက ဘာလုပ်နေကြတာလဲဟင်” မိခင်ဖြစ်သူက ကလေးကို အမှန်မပြောချင်ဘူး။ ဒါနဲ့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ “အော်.. သားရယ် အဲဒီမမတွေက သူတို့ယောင်္ကျား အိမ်ပြန်လာမှာကို စောင့်နေကြတာကွဲ့” ဒါကို တက္ကစီမောင်းသူက ကြားပြီး ပြန်ပြောလိုက်တယ်.. “ဟာ အစ်မကြီး.. ကလေးတွေကို လိမ်မပြောရဘူးလေ.. အဲဒီမိန်းမတွေဟာ ယောင်္ကျားတွေကို မြူဆွယ်ပြီး မကောင်းတာလုပ်စားနေတဲ့ မိန်းမတွေလို့ အမှန်အတိုင်း ပြောသင့်တာပေါ့” ကလေးက “ဟုတ်လား မေမေ” “အင်း အင်း ဟုတ်တယ်သား” မိခင်ဖြစ်သူက တက္ကစီသမားကို မကျေနပ်ပေမယ့် အမှန်အတိုင်း … Read more
အဂ်ါ သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ် မေလ (၁)လစာဗေဒင်ဟောစာတမ်း
အဂ်ါ သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ် မေလ (၁)လစာဗေဒင်ဟောစာတမ်း ယခုကာလအတွင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖတ်များနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် စိတ်အလိုမကျမူများအနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်းလည်းအစစအရာရာ စိတ်ညစ် စိတ်လေ အဆင်မပြေ မှုများကြုံတွေ့ရတက်ပါတယ်။ အတိုက်အခံ အချေအတင်များနှင့် မနာလိုမုန်းထားသူများရှိနေတတ်၍ အပြောအဆိုအနေအထိုင်သတိထားသင့်ပါတယ်။ အထက်အကြီးအကဲများ၏အကူအညီများရရှိ၍ အစိုးရနှင့်ပတ်သတ်သော၊ အုပ်စု အသင်း အဖွဲ့နှင့်ပတ်သတ်သောလုပ်ငန်းများအဆင်ပြေမှုများရရှိပါမည်။ ပညာရေး နှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စများတွင်သူတစ်ပါး ၏ အကူအညီများရရှိတက်ပါတယ်။ စားသုံးကုန်များ ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သော အရာများ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ပါက အကျိုးထူးခံစားရမည်။ ငွေကြေး အဝင်ရှိသလို အထွက်များလည်းရှိနေတတ်ပါတယ် သေချာသိပြုသုံးစွဲရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဤကာလတွင် ငွေမချေးမိပါစေနှင့် ပြန်တောင်းရာတွင်ခတ်ခဲနေတတ်ပြီး ပြန်တောင်းလို့အမုန်းခံရတတ်ပါတယ် ။ မိမိပေးစရာရှိသောအကြွေးများဖိအားပေးအတောင်းခံရတတ်ပါတယ်။ မိမိ မမျော်လင့်သော သူများထံမှလည်း အကူအညီရရှိတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးတွင်ချစ်သူအိမ်ထောင်ဖတ်နှင့် စကားမကြာခဏများရတတ်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းရေးအပူသောကများကြုံတွေ့ခံစားရတတ်ပါတယ်။အချစ်ရေး … Read more
မြန်မာငွေစက္ကူအသစ်များ ရိုက်နှိပ်ရန် ငွေစက္ကူကုန်ကြမ်းများ တန်၁၀၀ နီးပါး နေပြည်တော် ဆိုက်ရောက်
မြန်မာငွေစက္ကူအသစ်များ ရိုက်နှိပ်ရန် ဥဇဘက်ကစ္စတန်မှ စက္ကူကုန်ကြမ်း တန် ၁၀၀ နီးပါး တင်ဆောင်လာသော IRA4705 လေယာဉ် နေပြည်တော် ဆိုက်ရောက်၊ စစ်တပ်က ငွေစက္ကူကုန်ကြမ်းများ အကန့် အသတ်မရှိတော့ဘဲ ဆက်တိုက်တင်သွင်းနေ ရန်ကုန်၊ မေ ၃ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေစက္ကူအသစ်များ ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေရန် ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှ ငွေစက္ကူကုန်ကြမ်း တန် ၁၀၀ နီးပါး တင်ဆောင်လာသော IRA4705 – Boeing 747-21AC လေယာဉ် နေပြည်တော်တွင် ဆင်းသက်နေပြီး ငွေစက္ကူကုန်ကြမ်းများကို စစ်တပ်က ရွှေ့ပြောင်း သယ်ယူနေကြောင်း သိရှိရသည်။ အီရန်လေကြောင်းပိုင် IRA4705 ကုန်တင်လေယာဉ်သည် နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ ယနေ့ မေလ ၃ ရက်နေ့ ၁၂ နာရီ ကျော်ဝန်းကျင် ဆိုက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ … Read more
လူမႈကြယက္ေပၚမွာ ပ်ံ႕ေနတဲ့ သူမရဲ႕ ဓါတ္ပုံေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ သတိေပးစကားေျပာၾကားလာခဲ့ ျခင္း ခံရတဲ့ ေရႊ႐ူပါဦး
လူမှုကွယက်ပေါ်မှာ ပျံ့နေတဲ့ သူမရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှ သတိပေးစကားပြောကြားလာခဲ့ ခြင်း ခံရတဲ့ ရွှေရူပါဦး ပရိသတ်ကြီးရေ ခြေထောက်အလှပိုင်ရှင် ရွေရူပါဉီးကိုတော့ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါနော်။ သူမအား တချို့ကတော့ စစ်တပ်အားပေး “တပ်ကုန်းမလေး”လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်နော်။ သူမဟာ စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကျင်လည်ကျက်စားနေသူ တစ်ဉီးဖြစ်ပြီး အရာရှိများ ဝစ်သည်များနှင့်လည်း အမှတ်တရဓာတ်ပုံများ တွဲရိုက်ကာ လိုင်းပေါ်တင်ကြွားလေ့ ရှိသူတစ် ဉီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သို့သော်ယခု နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမနဲ့ဓာတ်ပုံ တွဲရိုက်ဖူးသောစစ်သားတိုင်လိုလို ရာထူးကြီး/ငယ်မရွေး အသက်မရှည်ဘဲ မပြန်လမ်းသို့ အမြန်ကြွလှမ်းသွားလေ့ရှိကြောင်းအချက်အလက်များနှင့်တကွ သတင်းအတိအကျ ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက် စစ်တိုင်းဌာန တော်တော်များများဟာသူမ လာရောက် လှူဒါန်းလည်ပတ်ပြီး ဓာတ်ပုံအတူတွဲရိုက်ရမှာကို စိုးရွံ့ကာရွှေရူပါဉီးအား မည်သည့်အကြောင်းနဲ့ဖြစ်စေ တပ်တွင်း ဝင်ရောက်ခြင်း ခွင့်မပြုရ ဟူသော အမိန့်စာများထုတ်ပြန် ထားတယ်လို့ … Read more
“ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် 2022 ခုနှစ်၊ မေလ တစ်လစာ ဟောစာတမ်း”
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး စီးပွားရေးမှာ ကြိုးစားအားထုတ်သလောက်၊ ကံရှိသလောက်အဆင်ပြေအောင်မြင်နေပါမယ်။ စီးပွားရေး အဆင်ပြေနေသလောက် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ နေ နေရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်၊ ဝန်ထမ်းများတာဝန် တွေပိနေတတ်တယ်။ လူငယ်များကိုယ်လုပ်ချင်တာတခြား မိဘကလုပ်စေချင်တာ တစ်မျိုးမို့ စိတ်ညစ်နေရတတ်ပါတယ်။ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်များ အနေနဲ့ လူပေါင်းမှားတတ်ပါတယ်။ အပေါင်းသင်း၊ငွေကြေး၊ နောက်လိုက်ပြီး မလုပ်သင့်တာတွေလုပ်မိလို့ကတော့ ပြဿနာ တွေတန်းစီပါလာတတ်ပါတယ်။ လူလတ်ပိုင်းနဲ့ လူကြီးပိုင်းများအနေနဲ့ကတော့ အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ ပြဿနာမျိုးမရှိပါဘူး။ ငွေဝင်များနေသလို စုတ်ကော၊ လာဘ်ပါ ကောင်းနေချိန်မို့ ပျော်ရွှင်ရပါမယ်။ရသမျှငွေကြေးကို သိုသိုသိပ်သိပ် ချွေချွေတာတာလေး သုံးစွဲဖို့လဲ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။ အချစ်ရေးမှာ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းမငယ်လေးများ စန်းအလွန်ပွင့်တဲ့ အချိန်ပါပဲ။ ချစ်သူမရှိသေးသောသူများ၊ အရမ်းကို စန်းပွင့်ပြီး ကိုယ့်အပေါ် Crushနေတဲ့သူတွေ များနေပါမယ်။ LDRS များအချစ်ရေးမှာ ၃ပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ LGBT … Read more
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာလာေနခ်ိန္ မိသားစုနဲ႔ခြဲကာ ႏြားတဲႏွင့္ ယာယီတဲထိုးၿပီး ေနထိုင္ရသည့္ နီေပါႏိုင္ငံရဲ႕ ထူးဆန္းသည့္ဓေလ့
ကမာၻႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတိုင္းစီမွာလည္း ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံသည္ မတူညီပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ၾကသည္။ ယခုတြင္လည္း နီေပါႏိုင္ငံရွိ Kalekanda႐ြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဓမၼတာလာေနခ်ိန္အတြင္း အိမ္ရွိအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ခုမွ ကိုင္တြယ္ခြင့္မရွိသည့္အျပင္ မိသားစုနဲ႔လည္း အတူေနထိုင္ခြင့္မရွိေပ။ သူတို႔႐ြာရဲ႕ ဓေလ့ထုံးစံအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာလာျခင္းကို မသန္႔ရွင္းေသာအရာတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အိမ္ကေနေမာင္းထုတ္ကာ ႏြားတင္းကုပ္ႏွင့္ အျခားတဲစုတ္တဲျပတ္ေတြမွာ သီးျခားေနထိုင္ေစခဲ့သည္။ အပ်ိဳေဖာ္စဝင္သည့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအျပင္ ကေလးေမြးဖြားထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း မသန္႔ရွင္းပူးဟု ယူဆကာ သီးျခားခြဲၿပီးေနထိုင္ရၿပီး မိသားစုရဲ႕ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေတြကိုလည္း မခံရသည့္အတြက္ အသက္ရွင္ေအာင္ မနည္း႐ုန္းကန္ၿပီး ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ 1. 2. 3. Rain (For Ialinks) Unicode အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာလာနေချိန် မိသားစုနဲ့ခွဲကာ နွားတဲနှင့် … Read more
( ၇ )ရက်သားသမီးအတွက် တစ်နေ့တာဟောစာတမ်း (၃.၅.၂၀၂၂)
3,May .2022 တစ်နေ့တာလမ်းညွှန်ချက်၊ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် သိစရာများနှင့် 7ရက်သားသမီးဟောစာတမ်းအကျဉ်း ဒီနေ့ဟာ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၄ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း(၄)ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၂ခုနှစ်၊မေလ(၃)ရက်နေ့လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့နံနက်(၄း၅၁)နာရီမှာ အရုဏ်တတ်ပါတယ်။ နေထွက်ချိန်နံနက်(၅း၃၉)နာရီဖြစ်ပြီး၊ ညနေ(၆း၃၁)နာရီမှာ နေဝင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ဆောင်သင့်တဲ့လာဘ်နေအရပ်က အရှေ့တောင်အရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှောင်သင့်တဲ့ နတ်နေအရပ်က အနောက်မြောက်အရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ စန်းပွင့်ရာအရပ်က တောင်အရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်သမားမြေခံ နဂါး မြေခံဖြစ်၍ ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတတ်သော နေ့ဖြစ်တာကြောင့် ပျဉ်ထောင်အိမ်တွေ၊ တဲတွေ၊ ဆိုင်ခန်း၊ လိုင်းခန်းတည်ဆောက်ခြင်းတွေ၊ အိမ်ခန်းဖွဲ့တာတွေ၊ အိမ်ပြင်တာတွေ၊ မြေတူးဆွတာတွေ ဆောင်ရွက်ရန် မသင့်ပါ။ ဒီနေ့ဟာတီထိမြေခံအရ တနင်္လာမြေခံတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္လာမြေခံ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေ့မှာ လုပ်ကိုင် လိုက်သော လုပ်ငန်းများမှန်သမျှ အကျိုးအမြက်ကြီးကြီးမားမားရရှိကြွယ်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း၊ စည်းစိမ်ဉစ္စာ … Read more
လူတွေမှာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကိုမွေးစားပြီး ပြုစုထိန်းသိမ်းရတာကိုကြိက်နှစ်သက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အများစုမှာ တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူများဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူတူ ဖြတ်သန်းနေရတာကိုဘဲကျေနပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လည်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းမှုနဲ့ သစ္စာရှိမှုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကအပြုံးကို ဘယ်တော့မှမပျက်ပြယ်စေပါဘူး။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးက သူမရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် ကြောင်တစ်ကောင် ဟာ ညဘက်အချိန်တွေမှာ အိမ်မှပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိပြီး တစ်ညလုံး ဘယ်မှာမှသူမရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူမရဲ့အချစ်တော်ကြောင်လေးက မနက်ရောက်မှအိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပင်ပန်းကာ အိပ်မောကျနေခဲ့ပေမဲ့ သူမကို အံ့အားအသင့်ဆုံးဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့အရာက သူမကြောင်လေးရဲ့လည်ပင်းမှာ တရုတ်ယွမ် ၁၀ တန် ငွေစက္ကူတစ်ရွက်ကပ်ပါလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူမက ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းအဖြစ်ကို သခင်ဖြစ်သူက နောက်ပိုင်းမှာ ပိုမိုသတိထားမိလာခဲ့ပြီး သူမကြောင်လေးက နောက်တစ်နေ့မနက်ရောက်တိုင်း အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပုံရပြီး အိပ်ပျော်သွားခဲ့တဲ့အပြင် အိမ်သို့ငွေစက္ကူများယူဆောင်လာခဲ့ခြင်းဟာ ကြောင်လေးက ” ညဆိုင်း ” အလုပ်လုပ်နေတာကြောင့် ညဘက်ရောက်တိုင်းပျောက်ပျောက်သွားတာလားလို့ သူမ မကြာခဏတွေးခဲ့မိကြောင်းကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ … Read more